September 2013 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Aung Ko Htet at 6:56:00 PM 0
ဒီ software လေးကတော့ click တစ်ချက်နှစ်လိုက်တာနဲ့ Root လုပ်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါ။
တကယ့်ကိုတစ် click တစ်ချက်တည်းပါ။ ဒါပေမဲ့ သတိထားစေချင်တာကတော့ ကိုယ် Root လုပ်ချင်တဲ့ phone ရဲ့ USB Driver ကိုတော့ computer မှာ Run ပေးထားရမှာပါ။ အဲ့လိုမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ကျွန်တော် Root tool တွေတင်ပေးတိုင်းသတိပေးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် driver မ run ပဲ software နဲ့ပဲ Root လုပ်တာ ခုနှစ်ရက်ကြာပါတယ်။ ပြီးတော့ phone မှာလည်း USB Debugging ကို on ထားပေးပြီး unknown sources ကို အမှန်တွေ on ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဆင့်မှာရှိကြတဲ့ ဆရာသမားတွေကိုတော့ မပြောပါဘူးနော်။ ကျွန်တော့်ကို ဘာမှ နားမလည်သေးဘဲ အခုမှစပြီးလေ့လာခါစ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် သတိပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီ software လေးက ဘယ် phone တွေကို support လုပ်ပေးထားလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်က link လေးကိုနှိပ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Root Tool software အတွက်တော့ အောက်က link တွေကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Download ( Copy)
credit to >>>> MM IT Helper
Recovery tools ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 5:58:00 PM 0
Ontrack EasyRecovery ဟာ ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံး၊ Format ရိုက်မှား၊ Delete လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို အကုန်လုံးနီးပါး ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်ရှာဖွေရယူနိုင်ပါတယ်.. ဘယ် Storage Device မဆို ရှာဖွေပြီး Recover လုပ်ပေးပါတယ်.. လုပ်နည်းကလည်း လွယ်လွယ်လေးမို့ မပြောပြတော့ပါဘူး..
Crack ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲတော့ ပြောချင်ပါတယ်..
1. Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ. ပြီးဆုံးသွားရင် Lunch မလုပ်ပါနဲ့..
2. Crack ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ရင် ဖိုင် (၂) ခုတွေ့ပါမယ်.. ကိုယ်က Windows732 bit တင်ထားရင် EREnt.exe , 64 bit တင်ထားရင် EREnt64.exe ကို Copy ကူးထားပြီး Desktop က Ontrack Icon ကို ညာကလစ်ထောက်လိုက်ကာ Open File Location ကိုနှိပ်လိုက်ပါ. ပေါ်လာတဲ့ဘောက်ထဲမှာ ခုနက copy ကူးလာတဲ့ဖိုင်ကို Paste ချလိုက်ပါ.. Replace လုပ်မှာလားမေးပါမယ်.. Replace လုပ်လိုက်ပါ..
ဒါဆို Full Version ဖြစ်ပါပြီ..
Myanmar IT Sky at 4:45:00 PM 0
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဗဟု နဲ့ သုတ
CDMA(Code Deivision Multiple Access) နည်းပညာကို
၁၉၉၃ တွင် စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ CDMA
နည်းပညာကို Qualcomm မှစတင်၍ Ericsson က
ဆက်လက်ပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြုပြင်မှု အချို့ကို
ပြုလုပ်ပါတယ်။ Code Division Multiple Access ကို
အသုံးပြုထား၍ Privacy ပိုကောင်းပြီး GPS စနစ်များမှာပါ
အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ 2G Network အတွက် CDMA One
ခေါ် IS-95A ကို ဟောင်ကောင်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
1999 ခုနှစ်တွင် CDMA IS-95B ကို ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ
စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ တွင်ကျယ်စွာ
သုံးစွဲလာပြီးနောက်မှာ ဂျပန်နှင့် ပီရူးနိုင်ငံများမှာလည်း
ဆက်လက်သုံးစွဲလာကြပါတယ်။ CDMA လိုင်းဆွဲအားသည်
သာမန် Analog Cellular ဖုန်း ကွန်ယက်ထက် ၈ ဆမှ ၁၀ ဆထိ ပိုကောင်းလာပြီး GSM System ထက်ဆိုရင် ၄ ဆမှ ၅ ဆ ထိပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ CDMA 2G Network ကို အသုံးပြုစဉ်မှာပဲ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ သုံးစွဲသူတွေဟာ ၆ နှစ်အတွင်းမှာ လူဦးရေသန်း ၁၀၀ အထိ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလာကြောင်း စစ်တမ်းများအရ သိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၀၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစပြီး 3G ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်အတွက် CDMA 2000 1X (3G) Standard ကို စအသုံးပြုလာပါတယ်။ 3G Network မှာဆိုရင် ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အသံသာမက သတင်းအချက်အလက် Data များကိုပါပေးပို့နိုင်သော EV-DO (Evolution Data Only) နှင့် EV-DV (Evolution Data/Voice) စသော နည်းပညာများ ပါဝင်လာပါတယ်။ CDMA 2000 1X (3G) Standard တွင် 450 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz နှင့် 2100 MHz Frequency များကိုအသုံးပြုပြီး ကွန်ယက်အသုံးပြုသူအရေအတွက် ပိုမိုများပြားတယ်။ ယခုအခါတွင် CDMA ကို၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အသုံးပြုသူ ၅၀၂ သန်းရှိပြီး CDMA 3G Network အသုံးပြုသူတစ်မျိုးထဲမှာပင် ၄၉၈ သန်းအထိရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
CDMA ၏ အဓိက အားသာချက်
CDMA ၏အားသာချက်တွေဟာဆိုရင် GSM ထက် လိုင်းဆွဲအားပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး Analog System များမှာကဲ့သို့ FM Radio နှင့် ကြားဖြတ်နားထောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ Privacy ပိုကောင်းပါတယ်။ CDMA ထုတ်လွတ်တဲ့ Frequency က အခြား Mobile ထုတ်လွတ်တဲ့ Frequency ထက်ပိုမို ထုတ်လွတ်နိုင်တဲ့အတွက် ဖမ်းယူရရှိတဲ့အခါ အသံကြည်လင်ပြီး လိုင်းဆွဲအားလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ CDMA 800 MHz ဟာဆိုရင် Station ကနေ ၄၈ ကီလိုမီတာထိ ဖမ်းယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ တတိယဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တိုးချဲ့မှုတွင် CDMA ကို အဓိကအသုံးပြုကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၅ နှစ်ကုန်မှာ CDMA 800 MHz ကို Qualcomm အထိုင်ဖုန်းများနဲ့ စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ CDMA ဖုန်းနံပါတ် ၇၀၊ ၇၁၊ ၇၂၊ ၈၀ တို့နဲ့အစပြုတဲ့ ဖုန်းအများစုဖြစ်ပြီး RUIM Card အစားဖုန်းအတွင်း ESN Code ထည့်သွင်း၍ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ CDMA 450 MHz စနစ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်က စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါတွင် ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေကိုပါ ကွန်ယက်ဆက်လက်တိုးချဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများမှ အထိုင်ဖုန်းနှင့် Handsets ၂ မျိုးစလုံးဖြင့် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။
CDMA Handset နဲ့ အထိုင်ဖုန်းတွေမှာ GSM Phone တွေလောက် Function အထွေအထူးမပါဝင်ဘဲ ကွန်ယက်ကိုသာ အဓိကထား၍ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ GSM Smart Phone များကဲ့သို့ Function များပါဝင်သော Handset များကို Supplier တွေက ဖြည့်စွက်ခဲ့ပါတယ်။ CDMA အထိုင်ဖုန်းများတွင် FM Radio, Fax, IDD call တွေ ပိတ်လို့ရတာမျိုး၊ Lock ချလို့ရတာ၊ Conference Call တွေအစရှိသဖြင့် ပိုမိုစုံလင်အောင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ CDMA လက်ပိုင်ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်လည်း MP3, MP4 သီချင်းနားထောင်လို့ရတာမျိုးတွေ၊ Camera စသည်တို့ပါဝင်သော ဖုန်းများကို အသုံးပြုလာပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြေရမယ်ဆိုရင်တော့ သာမန်အိမ်သုံးနဲ့ လုပ်ငန်းသုံးများအတွက် CDMA 450 MHz အထိုင်ဖုန်းများက CDMA လက်ပိုင်ဖုန်းများထက် ပိုမိုအသုံးတည့်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ အခြားသော ဖုန်းတွေထက် CDMA ဖုန်းတွေက လိုင်းဆွဲအား အထူးကောင်းမွန်ပြီး Transmission အတွက် ဖုန်းပါဝါကို အဓိကထားအသုံးပြုကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဘက်ထရီစားနှုန်းမှာ သာမန် GSM ဖုန်းများထက ပိုမိုမြင့်မားပြီး ဘက်ထရီတက်တမ်း ပိုမို တိုတောင်းတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
(၁) CDMA 450 Phone တွေမှာ ဘာကြောင့် ဘက်ထရီအကုန်မြန်ရတာလဲ?
အဓိကအကြောင်းကတော့ CDMA 450 MHz Network ဟာ Low Frequency Band ဖြစ်တာကြောင့် Network Coverage Area ဟာ အခြား High frequency တွေထက် ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် Cell တွေမှာ Transmit Power ပိုမိုသုံးစွဲရတဲ့အတွက် အခြားဖုန်းတွေထက် ဘက်ထရီအကုန်မြန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၂) CDMA 450 MHz Network ကို မည်သည့်ဒေသတွေမှာ အဓိကထားပြီးတော့ သုံးစွဲသလဲ?
CDMA 450 MHz Network ဟာ Frequency အနိမ့်ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် အတားအဆီးနည်းတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ အသုံးများရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အတားအဆီးများတဲ့ မြို့ပြဒေသတွေမှာကျတော့ အဆောက်အဦးတိုက်တာတွေ Block ဖြစ်နေပြီး Penetration ပိုင်းမှာ အနည်းငယ်အခက်အခဲရှိနေတာကြောင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာ အဓိကထားပြီးသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၃) CDMA ၏ နည်းစနစ် အားသာချက်
CDMA 450 MHz Network ဟာ Large cell size ဖြစ်ပြီး Coverage Area ကျယ်သောကြောင့် Base Station နည်းနည်းဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ Base Station နည်းနည်းဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အတွက် ကွန်ယက်တိုးချဲ့သည့်အခါ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ Transmission Signal များကိုလည်း အခြား GSM Network တွေထက် Receving လုပ်နိုင်ခြင်း (Better Receive Signal at Receiver) လိုင်းဆွဲအားမှာလည်း အခြား Network များထက် ပိုမိုသာလွန်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကားကောင်းကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက် Window7Lambogini Theme (10MB)
အိုင်တီသားလေး at 10:50:00 PM 0
ကားကောင်းကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက် Window7Lambogini Theme လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကားတွေကတော့ရေလည်လန်းတယ်ဗျာ။ ၀ယ်မစီးနိုင်တော့လည်း သရေတော့ကျမိသား။ မိမိကွန်ပျူတာကို အလှဆင်လိုသူများ အကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။ Window7themes များကို ဒီနေရာမှာ ယူနိုင်ပါတယ်။ Window 8 မှာ လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Android အတွက် စွယ်စုံသုံး Android Tuner v0.11.2 Apk (Latest Version) လာပါပြီ
အိုင်တီသားလေး at 11:48:00 AM 0
Android အတွက် စွယ်စုံသုံး ဆော့ဝဲလ် Android Tuner v0.11.2 Apk (Latest Version) လာပါပြီဗျာ။ Android ဖုန်းတစ်လုံးးရဲ့ battery, cpu, network, memory ကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်ပေးခြင်း၊ မလိုအပ် တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ကို uninstall လုပ်ခြင်း၊ Android ဖုန်းကို မြန်ဆန်သွက်လက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ Android ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ programs တွေကို ပိတ်ပေးခြင်း၊ ဖုန်းကို backup/restore လုပ်ပေးခြင်း၊ System app များကို ဖျက်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ Android ဖုန်းကို Reboot, Recovery , Bootloader, shudtdown လုပ်နိုင်ခြင်း အစရှိတာတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ APN, BT discovery, GPS & WiFi Localization ကိုဒီဆော့ဝဲလ်နဲ့ အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ tools တွေကိုအကုန်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို root လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Android version 2.1 နှင့်အထက်မှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးဝင် tools များစွာပါဝင်တဲ့ အတွက် Android ဖုန်းရှိသူတိုင်း အသုံးပြုသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
" Android Tuner v0.11.2 Apk is
The most complete app for monitoring and controlling your Android devices" လို့ဆိုထားပါတယ်ဗျာ။
- Battery saver (cpu, switch off wifi, bt…)
Myanmar IT Sky at 2:08:00 AM 0
KVM ဆိုသည်မှာ Keyboard, Video နှင့် Mouse ကို
ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး တနေရာတည်းရှိ keyboard, monitor နှင့်
Mouse မှ ကွန်ပြူတာ(SERVER)များစွာကို KVM switch မှ
ထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။KVM switch ကို အသုံးပြုခြင်း
အားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်
ပစည်းများ နေရာချထားမှုကို တစ်စုတစည်းတည်းထဲ
ဖြစ်စေခြင်းတို့အပြင် SERVER များစွာကို တစ်နေရာတည်းမှ
တစ်ပြိုင်နက်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းကြောင့် အလုပ်ပြီးမြောက်မှု မြန်ဆန်လာပါတယ်။
Administrator များအနေဖြင့် KVM switch တွင်
ချိတ်ဆက်ထားသော Server အားလုံးကို တစ်နေရာ
KVM မှာ BUS ဘယ်နှစ်ခုပါသလဲ ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။
Dual Bus KVM တစ်ခုမှာဆိုရင် Remote Bus တစ်ခု
Local Bus တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ Local Console ကနေ
တိုက်ရိုက်ဝင်သုံးတာကို Local Bus က ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပြီး
Remote ကနေ IP မှတဆင့် ၀င်ရောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကိုတော့
Remote Bus က လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ Remote Bus ကနေပြီး
Multiple Users တွေ တပြိုင်နက်တည်း KVM ကို Login ၀င်နိုင်ပါတယ်။
အချင်းချင်း Message ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုသတိပြုရမှာက တကယ်လို့ Remote BUS ဟာ
တစ်ခုတည်းဖြစ်ခဲ့ရင် Remote Users များဟာ KVM ကို
တစ်ချိန်တည်းမှာ Login ၀င်ထားနိုင်သော်လည်း တပြိုင်နက်တည်းမှာ KVM port တစ်ခုကိုသာ ၀င်ရောက်သုံးစွဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Credit >>> IT Group
Ye Naing at 3:01:00 PM 0
TubeMate.apkးAndroid သုံးဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ Youtube Video များကို Download ဆွဲပြီး Offline ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကတော့ အင်တာနက်ဖွင့် >>Run TubeMate >> အကောင့်ရှိလို့ Sign in လုပ်ချင်လည်းလုပ်၊ မလုပ်လည်းရပါတယ် >>Video Loading တက်လာပြီးရင်
Play ပါ >> ဒေါင်းချင်ရင်တော့ မြားစိမ်းလေးနှိပ်ပြီး နှစ်သက်ရာ Video Format ရွေးဒေါင်းပါကုန်....
ကျွန်တော်တို့တောမှာ၊ ဒိုက်ဦးမှာတော့ C800 Internet လိုင်းနဲ့ ဒေါင်းရတာ အတော်လေးအဆင်ပြေလို့
Zippyshare : 4Shared
Myanmar IT Sky at 4:40:00 PM 0
Window Phone အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများ
အားလုံးအတွက် Offline Map အသုံးပြု
Offline Map တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အတွက်
ကို Download ပြုလုပ်ပြီးထည့်သွင်းရမှာဖြစ်
ပါတယ်။မြေပုံကို Download ပြုလုပ်ဖို့အတွက်
Setting အောက်က Application အောက်မှာ
ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Download New Map
Download ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ...Down
ပြီးရင်တော့ မိမိဖုန်းထဲမှာ Offline Map အဖြစ်
Myanmar IT Sky at 4:06:00 PM 0
Window Phone တစ်လုံးကိုသုံးစွဲသူတွေအတွက်
မိမိတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ Data တွေနဲ့ အခြားဓါတ်ပုံ
Movie ဖိုင်တွေ၊ Application တွေကိုအကြောင်း
Backup ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုး
မျိုးကြောင့် Backup ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေဟာ
Backup လုပ်ထားပေမဲ့ ပျက်စီးသွားပါက အလွယ်
တကူ Restore ပြုလုပ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုတဲ့ Window Phone တစ်
လုံးထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေ၊ Application တွေနဲ့
အခြားသော Data တွေကို Backup ပြုလုပ်ဖို့
အတွက် Microsoft ပေးထားတဲ့ Cloud Storage
Server မှာပဲသိမ်းသိမ်းဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာ
နဲ့ Micro SD Card ထဲမှာပဲသိမ်းသိမ်း သိမ်း
Backup ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ App list
အောက်က setting ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ Backup ကိုရွေးချယ်ရမှာပါ။
Backup ဆိုတဲ့နေရာမှာ Turn on ပြုလုပ်ပေး
လိုက်တာနဲ့ Backup ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်
ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို Backup
Backup ဖိုင်ကိုဖျက်ဖို့အတွက် App-list>
Setting > Advanced > Delete ကိုရွေးချယ်
သင်ဖုန်းမှာအသုံပြုတဲ့ Microsoft Account
ကိုအသုံးပြုပြီးဖုန်းရှဲ့Setting အောက်က
ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ App & Message
တော့ Micro SD Card ကိုအသုံးပြုပြီး
ဆိုရင်တော့ Internet Connection လိုအပ်မှာ
Myanmar IT Sky at 2:53:00 PM 0
ဗဟုသုတ လေးရလိုရငြား Internet Journal
Samsung Galaxy Note3မှာပါတဲ့
.......... Samsung ကနေအသစ်ထပ်မံဝင်ရောက်
လည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ GSM စနစ်သုံး
ုဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး 2G, 3G ကွန်ရက်စနစ်
တွေအပြင် 4G LTE ကွန်ရက်စနစ်မှာပါအသုံးပြု
နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Sim Card ကတော့
Micro Sim စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်
စနစ်တွေအတွက်တော့ EDGE, GPRS, HSDPA,
WiFi စနစ်ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Note3ဟာ
တော့ ဖုန်းရဲ့နောက် Back Cover ဟာလည်း
Leather Cover ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းတွင်း
အသုံးပြု Sensor စနစ်ပိုင်းတွေနဲ့ Function
စနစ်ပိုင်းတွေမှာ ပိုမိုတိုးချဲ့ထားပြီး ဒီဖုန်းနဲ့
တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မယ့် Bluetooth Wireless
2>> CPU & GPU
.....ဒီဖုန်းမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ CPU ကတော့
Quad-core 2.3GHz Krait 400[N9005]/Quad-core
1.9GHz cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-
A7[N9000]CPU ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ CPU သုံး
မျိုးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ CPU စနစ်ပိုင်းမှာတော့
ကလည်း Adreno 330[N9005]/Mail-T628 MP6 [N9000]
GPU ဆိုပြီးတော့ GPU ကလည်း ၂မျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဂရပ်ဖစ်
..........Screen ကတော့ 5.7 လက်ရှိပြီး Screen အမျိုး
အစားကတော့ Super AMOLED Screen အမျိုးအစားပါ။
Screen စနစ်ပိုင်းမှာလည်း HD Resolution Screen
ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Screen Resolution ပိုင်း
မှာလည်း Galaxy Note II ထက်ပိုပြီးတော့မြင့်မားနေ
တာတွေ့ရပါတယ်။ Note II ကတော့ 720x 1280 pixels
ဖြစ်ပြီး Note3ကတော့ 1080x1920 pixels ရှိပါတယ်။
...........SNS intergration , Dropox (50GB storage),
TV-out(via MHLA/Vlink), MP4,WMV,MP3,WAV,FLA
Player,Organizer, Image/Video editor,Document
editor(Word,Exel,PowerPoint,PDF), Google search,
Voice memo/dial/comands အစရှိတဲ့စနစ်တွေကို
အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Touch Pen စနစ်ပိုင်းတွေမှာ
လည်းအဆင်မြှင့်တင်ထားပြီး Screen ကိုမထိပဲအသုံး
ပြုနိုင်မယ့် Air Gestures စနစ်နဲ့ Air View စနစ်ပိုင်း
............... OS ကတော့ Android OS ဖြစ်ပြီးဗားရှင်း
ကတော့ 4.3 Jelly Bean ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
6>>> Dimension & Weight
..............ဖုန်းအရွယ်အစားကတော့ အမြင့်က 151.2mm
ရှိပြီဘေးတိုက်အကျယ်ကတော့ 79.2mm ရှိပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့အထူကတော့ 8.3mm ဖြစ်တဲ့အတွက် Galaxy
Note2ထက်ပါးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလေးချိန်
ကတော့ Note3က 16g ရှိတဲ့အတွက် Note2ထက်
7>>> Sensor & Chipset
.............. Sensor စနစ်ပိုင်းမှာလည်းပိုမိုအဆင့်မြှင့်
မှာပါ။ Accelerometer Sensor , Gyro, Proximity,
Compass Sensor စနစ်တွေအပြင်နောက်ထပ်
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Sensor လေးခုကတော့ပါနေကျ Sensor
တွေဖြစ်ပြီးထပ်တိုးအနေနဲ့ barometer, temperature,
humidity, gesture အစရှိတဲ့ Sensor စနစ်တွေကို
ထပ်မံတိုးမြှင့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Chipset ကလည်း
အဆင့်မြင့်မားတဲ့ Qualcomm Snapdragon 800
(N9005}/Exynos5 Octa Chipset ကိုအသုံးပြုထား
............ ကင်မရာစနစ်ပိုင်းမှာလည်း တိုးမြှင့်မှုရှိနေပြီး
13 Megapixel ရှိတဲ့ HD ကင်မရာကိုထည့်သွင်းထား
ပါတယ်။ကင်မရာစနစ်တွေအနေနဲ့ autofocus , LED
Flash, Simultaneous HD video and image recording,
geotagging touch focus, face and smile detection,
image stabilization, panorama,HDR, Video စနစ်
တွေအပြင် Galaxy S4 မှာပါဝင်တဲ့ Dual Shoot Camera
စနစ်၊ Full HD Record Video စနစ်တွေကိုလည်းအသုံးပြု
နိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။2Megapixel ရှိတဲ့ရှေ့
Galaxy Note2ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာတာတွေ့
Internal Memory 32GB နဲ့3GB RAM ပါဝင်ပါတယ်။
SD Card ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးနောက်ထပ်
Myanmar IT Helper at 11:40:00 AM 0
Adobe acrobat program သည်
ဖလှယ်သုံးစွဲရာတွင် အဓိက ကျသည့် software
တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမျိုးကို
မဆို Acrobat ကို အသုံးပြု၍ PDF
(Portable Document Format) ဖိုင်အဖြစ်
စာအုပ်ထုတ်၍ ဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းဖိုင်စနစ်ဖြင့်
Electronic Book (သို့မဟုတ်) e-book ဟူ၍
လည်းကောင်း လူသိများသည်။ PDF ဖိုင်စနစ်ဖြင့်
မူရင်းအတိုင်း တိကျ သပ်ရပ်မှု့ရှိပြီး ရုပ်ပုံများ၊
စာလုံးများ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိသဖြင့် ၄င်းကို အီးမေးလ်
ပေးပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) INTERNET INTERNET
FILE SYSTEM တစ်ခုဖြင့် DISKETTE CD ROOM
စသည်တို့တွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး၊ MICROSOFT
WINDOW၊ MAC OS၊ UNIX စသည့် PLATFORM
(OPERATING SYSTEM) များကို အသုံးပြုကာ
ကဲ ဘယ်လို ပြုလုပ်ရသလဲ ဘယ်လို အသုံးပြုရ သလဲ
အောက်မှာ Download လုပ်ပြီးတော့ ဖတ်လိုက်ပါ။
Battery မကောင်းသည့် Window ဖုန်းတစ်လုံးတွင် Barrery နည်းပါက ပြုလုပ်သင့်တဲ့အချက်များ
Myanmar IT Sky at 1:59:00 AM 1
Window Phone တစ်လုံးမှာ
Window Phone ဖုန်းဟာ Battery
ပထမဦးစွာ Window Phone 8 ကို
အတွက် Settings ထဲကိုသွားရပါမယ်။
၁။ Setting ထဲမှ Brightness ကိုပိတ်ထား
၂။ Themes ကိုအရောင်စိုစိုတောက်
၃။ Setting ထဲက Tab and Send ကို
ကတော့ NFC အသုံးပြုတဲ့ဖုန်းအချင်း
အခါမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Feature တစ်
၄။ နောက်ကွယ်ကနေ App တွေ Run
မနေစေဖို့အတွက် Setting အောက်
က Application Setting အောက်ကို
သွားပြီး Background Task မှာ My
Battery ကို Block ပြုလုပ်ထားရပါ
၅။ Backup Setting အောက်မှာလည်း
app list+ Setting မှာ Turn off
၆။ Update တွေ အလိုလျောက်ဆွဲနေ
အောက်က Phone Update ကိုသွား
Download Update ကို Disable ကို
ပါက Battery သက်တန်းအားနည်းနေတဲ့
Myanmar IT Sky at 12:37:00 PM 0
ကျွန်တော်တို့ 2000ိ/ ကျပ်လောက်
Post by www.mmitsky.com
Ye Naing at 12:02:00 PM 0
Credit to - ၀မ်းကို ကိုအောင် (International Social Network Myanmar)
မြန်မာ Developer တစ်ယောက်ကြိုးစားပြီးရေးထားတဲ့ software ကိုအသုံးပြုပေးစေလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်း Developer ၀မ်းကို ကိုအောင် ရဲ့စကားလုံးများအတိုင်းတင်ထားခြင်းပါခင်ဗျ။
လေးတင်ပေးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ software တစ်ခုပါ မိမိကွန်ပျူတာမှာ CPU
တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးမိမိကွန်တာပျူဘာ windows တင်ထားလည်း User Name တွေပါဖော်ပြထားတဲ့
software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ Developer တစ်ယောက်ကြိုးစားပြီးရေးထားတဲ့ software
Unknown at 12:54:00 AM 0